उत्कृष्ट विषयगत संघ पुरस्कार जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघलाई « Sahakari Nepal
उत्कृष्ट विषयगत संघ पुरस्कार जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघलाई
प्रकाशित मिति :6April, 2018 11:09 am
बागलुङ । ६१ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा बागलुङ स्थित जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. बागलुङ उत्कृष्ट संघको रुपमा सम्मानीत भएको छ ।
सहकारी दिवसको अवसरमा जिल्ला सहकारी संघ लि. बागलुङले आयोजना गरेको प्रभातफेरी पश्चातको मुल समारोहमा जिल्लामा स्थापना भएका विषयगत संघहरु मध्येबाट सहकारी अभियानमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याए वापत बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. बागलुङलाई जिल्लाको उत्कृष्ठ संघको रुपमा पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो । संघ यस पूर्व नै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लि. नेफ्स्कूनको २६ औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा देशकै उत्कृष्ठ संधको रुपमा पुरस्कृत र सम्मान भईसकेको छ ।